The cashless izu ọjọọ - mmalite
Ego ọrụ gosiri dị ka Obere ụmụ ọhụrụ ndị na-amaghị ha nke ọma.
Anọ nnukwu "cashless Monsters" (MasterCard, Visa, American Express na Diners Club) e kwere ka na-a ndinuak predominance nke West si ịkwụ ụgwọ. Ọ na-abụghị nanị kontantlösheten n'onwe ya na-na-adịghị mma ma aku usoro na-akpata nke a.
M ga-ugbu a na-ebipụta na cashless izu ọjọọ nke "Cash naanị" serialized ebe a na Apg29. The akwụkwọ a ghara dabeere na Bible na okwukwe nke ndị Kraịst, ma ọ bụ akpali nnọọ mmasị anya nke zuru ụwa ọnụ aku otu n'ime akara dị ka Mkpughe 13 na-akọwa.
Ebe a emeso cashless phenomena dị ka kaadị akwụmụgwọ, cashless mobile ịkwụ ụgwọ na-enwe ọganihu kwupụta implants na electronic tattoos. The àmà na-egosi na ọdịnihu nke ahụ nso electronics site njirimara na ọmụma ga-eje ozi dị ka ma kaadị akwụmụgwọ, ụgbọala ikikere, akwụkwọ ikike ngafe, kaadị na na. Onye ọ bụla na-abụghị cashless ngwa pụtakwara na ọ yikarịrị ka ọrụ (ma e wezụga nke na-adịghị mma na ihe niile a na technology) na n'ọdịnihu ọ odụk cashless ọnyà. N'ihi nke a, akwụkwọ na-agba mbọ na-enye a sara mbara holistic echiche nke ahụ nso ngwá electronic. Kontantlösheten bụ idé nke ihe a na-emekarị na-akpọ nnukwu nwanne ọha mmadụ.
Ugbu nkịtị cashless ịkwụ ụgwọ na-Olee ihe enyemaka kewara na-eme na ma n'aka kaadị, ekwe ntị ma ọ bụ na Internet. Ọtụtụ mgbe ọ bụ ikpe nke a Nchikota ndị a. Kwekọrọ ekwekọ akụkụ Internet anoghi n'ulo oba, mobile anoghi n'ulo oba na ekwentị obot. The ụba ojiji nke ndị a mmiri were dị ka a pretext iji belata ego. Ọbụna ọzọ nke nwere ike ịmasị na a na-ekwu karịa kontantlöshet kwara. Ka ihe atụ, ATMs, ego, ego iga, anoghi n'ulo oba, na ikpeazụ ma bụghị dịghị ihe ọzọ ego. Ihe niile na-adabere ya bụ ọnụ. A ogologo oge na-emekarị kemgbe na na na naa ego ugwo site na cashless nhọrọ. Site cashless echiche, na obere ego a na-òtù Achilles n'ikiri ụkwụ. Ịkwụ Ụgwọ n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu (ọgbọ na-ọgbọ ịkwụ ụgwọ) nwekwara ọzọ na ndị ọzọ na mobile phones na ndị ọzọ na-esi.
The mesiri ike n'ebe a US na Sweden nakwa dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ kpuchie n'akwụkwọ. Account kaadị 'oké negativity na-mesikwuru site United States nwere a grotesque kaadị dominance na West. The mba kaadị ụlọ ọrụ na-abụghị United States (nke bụkwa ike na-adịghị mma) ka ọbụna ihe mmebi mgbe ha mesịrị eripịakwa ọ bụla American kaadị Rafa. Nke a nyere nwa ụwa me ụwa otu nzọụkwụ nso a cashless ugwo monopolies. Ebe a, MasterCard nwere a pụrụ iche na ọnọdụ n'ihi na ya ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ripia ma Eurocard (Sweden) na Mondex (UK).
Akwụkwọ a na-ekewa ngalaba na iberibe dị iche iche na ogologo na ọdịnaya na-enye onye na-agụ a mgbanwe na-adịghị ike gwụrụ nke oké coherent ederede. The akwụkwọ alternates n'etiti abụọ isi red wires. Mmepe nke cashless ọha mmadụ na-agha ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu, tumadi na Sweden na US na-emetụta ndị cashless direction ma ọ bụ jụ ya. Nke a bụ mbuaha na nnyocha, Atụmatụ maka ndị na-eguzogide na utọk megide cashless ọha mmadụ na arụmụka maka ego. E nwere ọtụtụ uru na ego. Ha na-ekwe na-amaghị aha ịzụrụ na-adịghị traceable, ọ dịghị ọzọ na-etinye aka na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike kpamkpam na-enweghị akara nye ego ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ihe n'eziokwu. Ma cashless oruru-emeso onye ọ bụla dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị omempụ.
The eziokwu na onwe mba ọzọ cashless azụmahịa na steti na ngọzi nke ndị ọchịchị ga-ekwe ka-eji dochie mba ọchịchị ego bụ kpere rụrụ arụ. Onye ọ bụla ga-ahụ absurdity na bara nnọọ ize ndụ na-niile nri na ume ga-emepụta kpamkpam na mpụga nke Sweden, na ike nke na ọ ga-enye ndị na-amị mba. Ma mụbaa, kontantlöshet hụrụ nkọ dị ka a ike mmepe. Nke a na-kụziri site na ọtụtụ n'ime ndị na oruru. The njọ ma ọ bụrụ na ọ bụ banyere ihe a otu amị mba. Banyere kontantlöshet si otú ahụ mgbe Sweden ihu ọma ama ugwo okwu ohu na United States. Na-aga n'ihu cashless globalizing emekarị paves ụzọ a ga-ekwe omume-adị njọ n'ọdịnihu.
The oké raw arumaru enweghị tụnyere ndị kasị hackneyed arụmụka maka kaadị akwụmụgwọ na kontantlöshet. Ị izute ndụ n'ezie na agaghị na-eche echiche ma na ọgụgụ isi ndị na-dị nnọọ nke a onye ụgha arụmụka n'ihi na njikere ịchụ ọdịnihu ya nnwere onwe site na iji kaadị akwụmụgwọ. Nke a akwụkwọ motargumenterar ike raw okwu. Cashless nhọrọ na-mgbe metọworo ebubo ma e wezụga eleghị anya, n'ihi na a obere oge. Nke a bụ dị ọcha n'efu na bụ ya onwe ya a ụdị "ngwa ngwa ohi". Ego nwere dịghị ụgwọ.
Ego bụ nyochawa siri ike, na-achọ ọ technical akụrụngwa bụ ụda decentralized na ala. The cashless systems bụ karịsịa ngwangwa. Iji nweta ego njuputa kwesịrị
nanị iri ndị asaa na narị ise patches emi odude ke atọ drawer na isi awọ sọks nke a akpan akpan onye na ọkụ ha na a sịga Mkpa ọkụ. Kontantlöshet akwa maka uwa ugwo ọdachi. Ndị dị otú ahụ nwere ike eme eme na ego. Ego bụ a nchekwa na nche.
Akwụkwọ a na-aduak ka iberibe a mgbaghoju anya ma ọ bụ na a Mozis na-emecha na-enye a akụkọ ihe mere eme, ugbu a na o kwere omume ga-eme n'ọdịnihu black picture nke kontantlösheten. Ọ dịghị "na-acha ọcha" kontantlöshet. Ihe niile bụ nwa. The isi mmalite mee ebe a na-egosi kontantlöshetens "na-egbuke egbuke black umi" na-agụnye Wikipedia, akwụkwọ akụkọ isiokwu, teletext na-adị mfe inweta ozi na Ịntanetị na nwere ike mfe hụrụ ọbụna enweghị zoro maka ndị chọrọ ịmatakwu. Pure akwụkwọ kontantlöshet nke e ji mee dị ka isi iyi bụ akwụkwọ ndị ụlọ kaadị nke Daniel Goldberg na Laịnọs Lars Petersson.
The mkparita uka nke ego na kontantlöshet na Sweden bụ nnọọ skewed na downside na ego. Ngagharị iwe kontantlöshet na ego dị ma nnọọ ịdị si obodo nke ndị mmadụ na ulo. Ọ dị ka ma ọ bụrụ na iwu ga nwere nanị otu ikpe n'akụkụ na dịghị agbachitere. Na n'ọdụ ụgbọ mmiri na-anọdụ ego. The naanị agbachitere dị bụ ọkàiwu si akpa guzo n'ebe mwute na nkịtị. Ọ bụla ọkàiwu na-egosi Otú ọ dị ghara. Ma eleghị anya, e nwere obere ọkàiwu na ikpe. Ọ bụ eleghị anya ọ bụghị dị ukwuu karịa Teskedsgumman. Ma, ka hapụ obere ọkàiwu nke mere na o nwere ike iri ukwu na obi ike. Ka ngagharị iwe na Sweden megide kontantlöshet ike.
Ọzọ tụnyere bụ na referendum na nuklia ike ama na kemgbe otu nhọrọ. Strong mgbasa. Ọzọkwa, ndị bi na-adịghị ekwe votu ọbụna ee ma ọ bụ ọ na nke a n'ihi na ọha mmadụ na-ama kpebiri na nuklia ike (na-agụ kontantlösheten) ga-emecha weghara ndị ọzọ nile ume. Ndị mmadụ nwere na ihe banyere ego na kontantlöshet ihe ọ bụla na-ekwu. Ma a referendum ga-abụ nke a keiberibe. Ị nwere ike ghara votu ịmanye ndị ọchịchị aka ike (ngụkọta kontantlöshet) ma ọ bụ na-ejigide ochichi onye kwuo uche (ego). Ọchịchị aka ike ga-dịghị mgbe a ga-ahọrọ.
Ọ bụrụ na ndị Soviet Union gaara nwere chọrọ ka ụwa Kọmunist. Ọ na-e mildly bụghị ihe na United States na ya bi ebe ahụ nabatara. Ị kwesịghị ịmanye mba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ego na usoro. Ugbu a omume. Ma mgbe US na-agbalị ịmanye na ike nke ụwa a cashless na ego usoro nke bụ nnọọ ole na ole protesters. Ọ dịghị ihe dị iche na niile ka ike nke ụwa ọchịchị Kọmunist. Kontantlösheten bụ n'ezie banyere inwe a plastic kaadị na gị obere akpa. Ọ bụ ihu ọma ihe ka eji nwayọọ na ukwuu. Ke adianade do, US kontantlöshetens genomruttne eze enweghị ihe ọ bụla yiri ihe atụ n'ụwa.
Banks översittaraktiga àgwà bụ mgbe ahụ na ọ bụ banyere ntozu okè na-amalite site na iji kaadị akwụmụgwọ. Ego ọrụ gosiri dị ka Obere ụmụ ọhụrụ ndị na-amaghị ha nke ọma. N'ikpeazụ chara n'onwe ha na Bank nke obibia na ike onwe ha na-eji potty, nke kwekọrọ na kaadị. Eziokwu na nkịtị uche show kama na ọ bụ banyere ntozu okè na uche nke na-eguzogide ma na-ajụ iji kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụ ezu na a isi analysis na mmachi eziokwu ekpokọta na-achọpụta na dum ihe kama banyere anoghi n'ulo oba 'anyaukwu na oké ọchịchọ.
Ọbụna dị obere ụmụ nwere oke. Ha pụrụ ikpebiri onwe ha ma hà na-eri ma ọ bụ mgbe ihe oriri na-awa. Kpebie ma ọ bụrụ na ha chọrọ igwu egwu na na na obi ụtọ ma ọ bụ oyo. Ma Swedish ndị okenye na-ekwe na ogologo bụghị ịhọrọ ego. The stroller bụ kama a toro nwoke gbara ajị ogologo ụkwụ n'ịnọgide si. The kontantlöse nne na nna na-eche na-enweghị ndidi na "nwa" na-amalite na-egwuri egwu a dangling toy esịnede mejupụtara pupụtara. The aguba pupụtara na kaadị akwụmụgwọ.
Mgbe oge site 50 na narị afọ 80 na narị afọ, Sweden ka Sweden n'agbanyeghị ma ọ bụ a na-elekọta mmadụ onye kwuo uche ma ọ bụ socialist ọchịchị na-achị. The mba ka na-imbued na ọdịmma, nche, na-anọpụ iche na onwe. Mgbe ahụ ihe nile malitere-aka njọ. Independence okụrede ọzọ na ndị ọzọ, ọ bụghị dịghị ego okwu. The odious ụwa + wetara mba anyị n'ime a ike achịkwa. The aku na uba bịara ọzọ ọzọ cashless.
Riksbank ja privatization emekarị ma ọ bụ naanị rụpụtara ọdachi dị ka Panaxia asịrị na helikọpta ohi. The ụgwọ maka akụ-ekesịpde ego management chockhöjdes. E nwere otú uche na-adịghị na-abawanye 1200 percent. Banks wee na-mkpesa àmà siri na ọnụ
management ezie na ha onwe ha bụ ndị n'ụzọ dị ukwuu na-ata ụta. N'oge a, ghọrọ ụlọ akụ alaka nwekwara cashless na a na-emenye ụjọ ijeụkwụ. The ahia na anoghi n'ulo oba na-eme mkpesa àmà siri banyere otú oké ọnụ ego ego mgbe n'ezie, anyị na-eji ọkụ site aku toppings kwuo nke a.
Ọnu avgrundsdjupets ala e ruru na mmekorita ọchịchị. Ego management gburu fọrọ nke nta kpamkpam na ebe ịchụàjà nke privatization. Ebe ọ bụ na Sweden ejiriwo nwayọọ nwayọọ na nọgidere na-slide na ala apịtị ala kwupụta ngụkọta cashless ọdachi. An nchoputa n'okpuru mmekorita ọchịchị emeso naanị ego okirikiri na bụghị ndị ziri ezi dị otú ahụ ego na ịdọrọ ego dị n'ụlọ akụ. Ụfọdụ ogologo oge nhọrọ n'etiti ego na kaadị adịghị ka a ga-ekwe.
Ụdi red-green ọchịchị nabatara niile ahụ òkù kwuo si otu n'ime ndị isi na-anọchite anya nke nnyocha nke n'ozuzu kontantlöshet. A ozi tụlere site òkù a niile nwere mmasị ọzọ. Nke a oge, ọbụna kontantlöskritiska nnọchiteanya na-na ala otú ahụ ụlọ ọrụ na dum nke Sweden ga na-ebi. Ọ bụ riksdagssak nke ego. Ma ọ bụla ike na ike turnaround banyere ego iwu dị mwute ikwu na-apụghị ghọtara. The ka kpọtụrụ aha nkatọ kwupụta ngụkọta kontantlöshet egosiwo ngwọta nke nsogbu mgbe ọ na-ede na ala ga-azụ ọrụ maka ego.
Ụfọdụ ọmụmụ gosiri na dị ka ọtụtụ ndị dị ka asatọ nke iri na ndị mmadụ chọrọ ego management usoro ga-amụba. Banks asị na amamihe na-adịghị chebe ahịa site na iwepu ego mgbe ndị ahịa, n'aka, fọrọ nke nta na-arịọ na-esi nwere ha n'ebe ahụ. Ndị mmadụ ga-nwere ọ dịghị ụzọ gbochie ndị cashless oruru site kpamkpam egbu ego usoro. Na cashless oruru pụtara isi Riksbank, atọ isi anoghi n'ulo oba, kaadị ụlọ ọrụ na a nnukwu ihe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, azụmahịa na mgbasa ozi. Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị na pop arụsị. Site n'enyemaka nke ụgha, ọkara ụgha na abụchaghị eziokwu ebutela Swedish ndị a na-agba ịnyịnya. Behind ha, ihe ndị ọzọ, na US ego n'ụwa na ya nnukwu akụ na kaadị ụlọ ọrụ.
Anọ nnukwu "cashless Monsters" (MasterCard, Visa, American Express na Diners Club) e kwere ka na-a ndinuak predominance nke West si ịkwụ ụgwọ. Ọ na-abụghị nanị kontantlösheten n'onwe ya na-na-adịghị mma ma aku usoro na-akpata nke a. Na ụfọdụ na-elekọta mmadụ na usoro na ọtụtụ mba anya na ya dị ka ihe dị mma na aku na uba ga-agba ọsọ amok enweghị mgbochi. Ọ hụrụ ka a ike na-achị onwe usoro. Nke a kwesịrị kama iji ya tụnyere ụfọdụ celebrity junkie otú ike na mgbe ụfọdụ ha na teetering n'ihu ọdachi nke ọnwụ.
The akwụkwọ a bu aha n'agbanyeghị banyere izu megide chepụtara. Ọ bụrụ na ị chọrọ mma onwe-ha na ndị a chepụtara bụ osimiri nke ozi n'ebe ọzọ. Ọ ga-abụ a ụgha na-ekwu na akwụkwọ a bụ ebumnobi. Ọ bụ nke ukwuu nke onye na onwe onye. Ọ pụtara dị ka a na-ekpesi oku maka mgba megide ihe na-enye nsogbu ego usoro ebe kontantlösheten bụ ọdịdị zuru oke. Ịgwa bụ na ebe a na a sara mbara-egosi isi. Ọ dị njọ na-agbalị ịchọta na uru nke ihe na-bụ fundamentally ọjọọ. Akwụkwọ a bụ oku na-jidere ikpeazụ ahịhịa.
E nwere ọtụtụ ihe na akwụkwọ bịara na-adị. Ma nnukwu ihe mere na okporo ọka na mebiri na camel na azụ bụ na ọtụtụ n'ime mmiri na-agaghịkwa ekwe ego dị n'ụlọ akụ na ndị cashless. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị bịara n'ikperé mmiri ka o kwere ka anyị na-ịdọrọ ego dị n'ụlọ akụ otú ahụ akwụkwọ a na-adịghị adị. Ọ nọwo na-ma-enye obi ụtọ na ihe bara uru dee akwụkwọ. Ma ọzọ oké ihe mkpali maka ide Umuihe iwe na obi nkoropụ n'ihi na omume nke na a ihu abụọ na simplistic cashless venues. Na-ede na chọrọ ga-asian, na ọtụtụ ndị arụmụka akpali nnukwu eguzogide kontantlöshet na Sweden.
The cashless ọnọdụ na nmepe si ego na-aga otú incredibly ngwa ngwa. Na na njedebe nke ọrụ a akwụkwọ, ihe ndị dị mkpa-eme na-adịghị abịa na akwụkwọ. Na-ede akwa ụta banyere ihe ndị dị mkpa ihe na-abịa na nke a akwụkwọ. Ma, otu ga-akwụsị na-ede na oge kwesịrị ekwesị. Olee otú fun na-akwụghachi ụgwọ ọ bụ dee a akwụkwọ, ọ bụ n'ihi na ebumnuche na dị ka ọtụtụ dị ka omume na-agụ ya.
Kontantlösheten na-enwetụbeghị ụdị kasị njọ na-elekọta mmadụ ọrịa ụwa akụkọ ihe mere eme. Ofụri Esịt ejikọrọ na ideological vomiting, Juda, imi, abu, red anya na ọbara ọgbụgba. Fanatical ndị chọrọ agbasa kontantlöshet bụ dị ka a otiti na-eweta ọnụ a n'ezie oké GOB na ọnụ na mgbe gbụsara ọnụ mmiri na zeeuere ihe uninfected ozugbo na ihu. Kama enyemaka ma gbụọ ya ọnụ mmiri ma ọ bụ ịrịọ mgbaghara ya echere ndidi kontantlöse na-kelere. Ọbụna ndị na-n'ezie na-adịghị mma ka kontantlöshet ịhụ ya "dị ka e dere kpakpando" n'ihi na ha chere na ọ bụ na-enweghị isi na ọbụna na-agbalị ya ọgụ. Akwụkwọ a chọrọ na-egosi na ọ pụrụ na kwesịrị ịlụ ọgụ megide cashless ọha mmadụ.
The akwụkwọ e dechara na uzo nke 2015/16. Dere na ọṅụ ebe na Sweden. The akwụkwọ a raara nye niile Swedish ụmụ embellish ndụ ya n'ihi anyị okenye. Ọ na-adịghị dere maka ụmụ na-agụ ya, ma na-eme ihe na ha nwere a ga-eme n'ọdịnihu dị ka a free ndị mmadụ dị ka ogologo dị ka o kwere.
Vecka 30, söndag 1 augusti 2021 kl. 08:47